SIDA LOO XOQDO SILSILAD SILSILAD AH OO GACANTA KU LEH GURIGAAGA - MISHIINADA GAARKA AH
Qalabka beerta: sida loo xiirto silsiladaha silsiladaha gacmahaaga
Milkiilaha kasta Xawaaruhu waa inuu awood u leeyahay inuu si madaxbanaan u xoqo silsilad qalabkooda. Dhamaanba, waxaa jira xaalado aan jirin meel ay ku sugaan caawimaad arrintan: wac master, ama u tag. Xaaladdan, waxaad u baahan doontaa talooyinkeena ku saabsan xoojinta silsiladda silsiladaha.
Waa maxay xakamaynta silsiladda, sida loo fahmo in silsiladdu ay noqoto mid cidhiidhi ah
Dammaanadda shaqada dheer ee sawirkaaga waa daryeelka saxda ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la buuxiyo kaliya gaaska iyo saliida tayada sare leh, iyo sidoo kale in la raaco fiiqnaanta ilkaha silsiladda. Marka ay koraan caajis, sawirku wuxuu bilaabmaa inuu jibiyo wax badan oo ka badan, tani waxay leedahay saameyn xun oo ku saabsan qaab dhismeedka oo dhan. Intaa waxaa dheer, waxaad arki kartaa in dhadday yar yar u duulaan ka soo arkeen, oo tani waa mid ka mid ah calaamadaha ugu muhiimsan ee silsilad caajis ah. Haddii ilkaha ay fiiqan yihiin, ka dibna balka dhererkiisu weyn yahay.
Waa muhiim! Isticmaalka gaaska marka aad la shaqeyneyso silsilad fara badan ayaa ku kordheysa qiyaasta 1.4 jeer.
Sidoo kale mid ka mid ah calaamadaha qabsashada caajisku waa balka madow. Sababta arrintan - Qalabka yar ee qoryaha ooy ka mid yihiin dareenka hoose ee ilkaha. Sawirku aad buu u badan yahay, adiguna waa inaad dareentaa. Marka ilkaha fiiqan yihiin - Ku dhowaadba dadaal lama doonayo in la gooyo qoorta. Tani waxay ka baxaysaa shidaalka yaryar oo hoos u dhigaa waxtarka geeddi-socodka. Gebogabadii, waxaad ku dari kartaa in qoryaha la duubo u baahan tahay si joogto ah, mararka qaarkood laba ama saddex jeer maalintii - ka dibna waxay kuu sahlanaan doontaa adiga iyo qalabkaaga inaad shaqeyso.
Si sax ah oo waqtigana u xoqaya silsiladda silsiladaha silsiladaha silsiladaha ayaa ku dari doona dhowr sanno oo nolosha ah mashiinkaaga. Sida laga soo xigtay xirfadleyda, silsilad fiiqan waxay ka muhiimsan tahay mishiin fiican.
Sida loo xiirto silsilad silsilado gacmo gaar ah leh. Tallaabada Talaabooyinka Talaabada
Si aad si habboon u xoqdo silsilad, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerarka qaarkood. Awoodda si habboon looga saari karo loona hagaajin karo silsiladda waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee hirgelinta.
Waxa aad u baahan tahay si aad u xoqdo sawirka guriga
Xidhan silsiladda sawirku waxay noqon kartaa labadaba iyo mishiin gaar ah. Dadka intooda badani waxay sameeyaan nidaamkan manhajka.
Si kastaba ha noqotee, xirfadlayaashu waxay ku talin waayeen in ay sidan sameeyaan marar badan, maadaama ay taasi horseedi karto in ay si degdeg ah u xirto. Laakiin weli waxaa jira waqtiyo marka ay lagama maarmaan noqoto in si sax ah loo xiirto gacanta.
Qalabkaan gaarka ah waxaa loo iibiyaa sidii loo xakameyn lahaa silsiladaha silsiladaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
Faylka wareega waxaa lagu iibiyaa qofka haysta kaas oo lagu lifaaqo. Hantidhawrka waxaa ku yaal khadadka oo leh jiheyn gaar ah oo kaa caawin doona marka aad ilkaha si fiican u fiiqayso.
Template waa loo baahan yahay si loo hagaajiyo xaddiga qotada dheer. Hookaha waxaa loogu talagalay in laga soo saaro boodhka iyo balka subagga. Qodobkani wuxuu xoojinayaa silsiladda silsiladda silsiladda loo baahan yahay by dhammaan bannaanka u.
Qalabka noocan oo kale ah sida gooyo, gooyaha isku dhafan iyo "Tornado" waxay faa'iido u yeelan doontaa ninkii beerta oo dhan.
Inta lagu jiro hawlgalka, qofka heysta waxaa lagu dhejiyaa iliga aad ku jajaban tahay. Faylka wada degan waxaa loo isticmaalaa in lagu shaqeeyo duruufaha qoto dheer.
Ma taqaanaa? Nooca ugu badan ee lagu iibiyo silsiladaha dunidu waa STIHL.
Laakiin waxaa habboon in la xasuusto in si joogta ah u xoqin ilkaha habka gacanta laguugula talinayo sababo badan:
oo ay weheliso nadiifinta mashiinka, ilkaha ayaa si aan caadi ahayn u qulqulaya, taas oo u horseedaysa dheellitirnaanta shaqada;
silsiladaha waayeelka ah waxay xiran yihiin wakhti ka dambeeya, iyo hagaajinta buuggu wuxuu noqdaa mid aan suurtagal ahayn
jajabku wuxuu lumin karaa qaabkiisa caadiga ah;
waxaa jira halis ah in la jebiyo silsiladda muddo waqti ah.
Haddii aadan rabin inaad ilkaha gacanta ku xirtid, markaa waxaad isticmaali kartaa mishiinka si aad u tirtirto silsiladaha silsiladaha. Mashiinnadani waa laba nooc: gacanta iyo korontada. Gacanta ayaa la qabtay waxay muujinayaan shaqada farsamada gacanta. Koronto - ku shaqeeya shabakad koronto. Laakiin labada nooc ee makiinadaha ayaa bixiya heer aad u sarreeya oo sax ah. La shaqeynta qalabka noocan oo kale ah, marka hore waxaad soo bandhigi kartaa xayndaabyada kowaad, ee loo yaqaan "control", ilig. Marka xigta waxay timaaddaa nadiifinta iyadoo la raacayo xuduudaha loo cayimay.
Waa muhiim! Had iyo jeer xiro gacmo gashi iyo ilaaliyeyaasha markaad la shaqaynayso silsilad.
Waxa kale oo jira hab seddaxaad oo lagu fiiqo silsiladda silsiladaha. Habkani waa mid cusub oo malaha ugu fudud. Kaliya iibso goobo gaar ah si loo xoqdo silsiladaha silsiladaha silsiladaha iyo silsilado khaas ah. Tani waa qalab yar.kaas oo la dhigo dhamaadka taayirada oo ku dhegan booska joogtada ah. Dhexdhexaadintu waa dhagax naxdigeed, kaas oo xoqin doona silsiladdaada, halka aad riixdid badhan.
Dhagaxan waxaa lagu dhejiyay qaybta hoose ee dusha sare. On silsilad waxaa jira linkages dhagxaan dhagxaanta iyo ha u oggolaan shidaal in ay ku dhicin on sawirka. Sida loo xoqdo silsiladda gacmahaaga ee habkan, waxaad fiirin kartaa fiidiyaha.
Ka qaadida silsiladaha silsiladaha
Si aad uga soo qaadato silsiladda silsiladda, marka hore waxaad u baahan tahay inaad gashato gaashaan ilaalin. Isla marka aad maqashid dhawaaqa foorjeerka ah, qabsashada bareeyaha iyo furfuraha silsiladda. Ka dib markaa, fur furaha furaha leh oo ka saar tuubada oo ay la socoto xayawaanka. Nidaamkan, ma jirto wax adag, marka laga reebo inaad u baahan tahay inaad si habboon u adkeyso silsiladda markaad dib u celiso - haddii aad jiidato, markaa waxaa jiraya fursad jajab. Waa hagaag, haddii aadan si adag u adkeyn, markaas silsiladku waxay u duuli karaan taayirrada oo dhan.
Ma taqaanaa? Xiddigaha ugu horreeya waxay u muuqdaan qarnigii 19aad.
Laakiin sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u jarto. Ka dib markaad silsiladda ku rido dusha oo aad isku wada dhigto, hubso in ay ku habboon tahay hoosta dusha. Silsilad caadi ah oo isku xiran waa inay ka baxaan xagga hoose ee dusha marka gacanta laga saaro 3-5 mm.
Sida loo xakameeyo oo loo xoqo silsiladda guriga
Si aad u fahamtid sida loo xiirto silsilad silsilad leh faylka, oo baro sida loo sameeyo guriga, waxaad u baahan tahay inaad raacdo tilmaamahan talaabooyinka soo socda. Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad si fiican u hagaajiso silsiladda. Waxaa jira habab badan oo lagu hagaajin karo. Habka koowaad waa in la hagaajiyo taayirada ku xigeen - tani waa habka ugu saxsan.
Sidaas awgeed waad hubsan kartaa in silsiladdu ay sii wadi doonto. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira habka labaad. Waxaad dib u fadhiisan kartaa, adoo hubiya sawirkaaga u dhexeeya lugahaaga heerka jilbahaaga oo aad bilawdid sharooto. Tan ugu muhiimsan, qaybta hoose ee taayiradu maaha mid ka hooseeya jilbahaaga.
Halkan waxaa ah talaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida loo xiirto silsiladaha silsiladaha faylasha leh faylka:
Ku adkee taayirada shinbiraha si ay u joogsato.
Xulo faylka saxda ah ee saxda ah iyo hanti-bixiyaha, markaa marka la gooyo jarista jar-jaryada, feylku wuxuu ka baxayaa wax ka badan 20%.
Ku calaamadee iliga oo aad bilowdo inaad jajabiso, si aadan u dhaafin wareegga labaad.
Iyadoo la xariiro, feylka ku qaado hal jihe oo keliya oo si joogto ah u dhexdhig hawlehiisa si ay u xirtaan si siman.
Haddii ay lagama maarmaan noqoto, faafin qoto dheer oo qoto dheer oo faylasha ah.
Aan aragno faahfaahin dheeraad ah habka lafteeda. Maskaxda ku hay in biraha laga sameeyo ilkaha oo jilicsan yahay, markaa waa inaadan si xoog leh ugu cadaadin faylka.
Oo waxaa muhiim ah in la xusuusto xaglaha is-goyska ee silsiladda silsiladda. Xagasha ee qiyaasta toosan ee faylka ee la xiriirta silsiladda waa inay ahaataa 90º, iyo in horizontal -30º ama 10º, iyada oo ku xidhan xuduudaha sawirada (xagasha 10º, boodbooyinka loogu talagalay tirtirayaasha la jarayo ayaa la fiiqay). Xagasha saxda ah iyo booska faylka ayaa kaa caawin doona inaad haysato hanti.
Waa muhiim! Haddii aad aragto in ilkuhu kor u kacayaan qoto dheer, markaa waxa fiican inaad beddesho silsiladda si aad u hesho mid cusub si looga fogaado qarxinteeda inta ay hawshu socoto.
Haddii adiga ama deriskaaga ay leeyihiin mishiinka si loo xiro silsilado, markaa waxaad nasiib u leedahay. Qalabkan waxaad si dhakhso ah u fiiqi kartaa sawirkaaga. Halkan waa nidaam qiyaas ah oo ku saabsan mashiinka mashiinka:
Si tartiib ah u fur furka silsiladda ku xidhan adigoo ku dhejinaya dhinaca midigta.
Taas ka dib, waa inaad jeebka ku xirataa mashiinka si markaasi ilkaha loo hagaajiyo.
Marka xigta waa inaad doorataa xagasha sharoobada (waxay ku xiran tahay nooca silsiladda).
Dooro nidaam isdaba-marin: xigasho ama iliga.
Hadda waxaad sii wadi kartaa nadaamka laftiisa.
Si aad uga welwelisid sida loo xiirto silsiladaha silsiladaha qalabka mashiinka si sax ah sida ugu macquulsan oo aan u qalmin. Dhammaan curyaamiyeyaasha casriga ah ee casriga ah waxay u keeneen si ku haboon. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad raacdo tilmaamaha kor ku xusan.
Taloyinka iyo tabaha: sida loo xoqdo silsiladaha guriga
Waxaad ku xiri kartaa qalabka fardaha guriga laba habab: faylka ama mashiinka.
Hadda oo aad ogtahay in aad u baahan tahay fayl gaar ah si loo xoqdo silsiladaha silsiladaha, waa inaad barataa qaar ka mid ah talooyin ku saabsan la shaqaynta:
Marka la xariiro, faylka waa in si siman loo xajiyo wareeggiisa;
Ma aha lagama maarmaan in la daabaco feyl aad u adag: walxaha laga helo silsiladda waa la jilicsan yahay;
Iska ilaali ilkaha marka hore jihada bidix, ka dibna sax ah, ama si ka baxsan;
Samee cadaadis isku mid ah ilig kasta, sidaa darteed qashin-saaridda waa dharka;
Haddii silsiladdaada duqowday oo ilkaheeduna aanay isku mid ahayn, fiiri iliga ugu gaaban uguna shubo sida ay tusaale u tahay;
Waa in la xusuustaa in si joogta ah u xoqday hal feyl oo keliya. Silsiladku waxay bilaabi doonaan in ay si dhakhso ah u xiranayaan, ilkaha ayaa si weyn loo qarin doonaa, taas oo horseedi doonta hawl qaldan oo fiilo ah.
Ma taqaanaa? In silsilado tayo sarre leh, ilkaha ayaa ka sameysan bir birta dhoobo-nikkel ah.
Waxaan u sheegnay inay jiraan waxyaabo gaar ah koronto iyo farsamo Sawirada silsilad fejis ah. Waxay bixiyaan nadiifinta dharka ugu badan ee sawirkaaga. Isticmaalka qalabkan ma aha mid aad u adag, laakiin waxaad u baahan tahay inaad xasuusato talooyinka farsamooyinka ah:
Raadi iliga ugu gaaban silsiladda - waxay noqon doontaa calaamadda waayo, isagu wuu hadlay.
Ha ilkaha si fiican u xoqin, haddii kale waxaad luminaysaa silsiladda xoogga iyo adkeysiga;
Ku nadiifi silsiladda ka dib markaad shidayso iyo saliid saliid;
Sidaas, hadda waxa ay noqotay mid cad oo la xidhiidha sidii loo xiri lahaa silsilad fara badan oo guriga ku yaal. Tani waa si fudud oo dhaqso loo samayn karaa labo siyood: faylka ama mashiinka.
Baahan si aad u xoqdo silsiladda si joogto ahHaddii kale waxay si xun u saameyn kartaa qalabka sawirrada. Haddii aad aragto in ilkaha ay gebi ahaanba xiranyihiin, waxaa wanaagsan inaad beddesho silsilad cusub mid cusub.